5 Ihe Kpatara Iji Gbaa ịnyịnya Night Ụgbọ oloko Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Ihe Kpatara Iji Gbaa ịnyịnya Night Ụgbọ oloko Na Europe
Ọ bụ ezie na European n'abali sleeper ụgbọ oloko na-aghọ ihe nke ihe n'ihe ize ndụ umu (mmefu ego ụgbọ elu na anyị na-achọ na ị na!), ụgbọ okporo ígwè ndị hụrụ ka na-agaghị enye elu! N'ihi na ịnụ ọkụ n'obi na ụgbọ okporo ígwè ndị hụrụ, ọ dịghị ihe gbagwojuru hopping n'ụgbọ n'abalị ụgbọ oloko na ịdị mma nke anya enweghị nwere agbaji akụ na-esi na ha na njedebe ikpeazụ.
Ọ bụrụ na ị na a na-eme atụmatụ a n'abalị ụgbọ okporo ígwè njem ná mba ọzọ ma na-na na na na na abalị ụgbọ oloko na-kasị mma nhọrọ, na-agụ dị n'okpuru.
IHE: All n'ime ihe ndị mere anyị na-na-etinye ọnụ agabigaghị "maka EBIDO, ị ga-emefu 10+ awa drooling na gị ubu dị ka gị isi jiggles megide ụgbọ okporo ígwè window ".
Night Ụgbọ oloko na-eri-irè
N'ihi na ọ bụla njem na mmefu ego (ma ọ bụ ndị ga kama iwepụtakwu on a mma efere na nlegharị anya karịa ha ga na a tiketi), n'abalị ụgbọ oloko ndị kasị mmefu ego-enyi na enyi nhọrọ ahọrọ (karịsịa maka ogologo njem). I nwere ike na-atụ anya gị mmefu bee na ọkara mgbe ị na-eji dochie atọ ma ọ bụ anọ, ehihie na abalị a hotel (ọbụna otu n'ime dị ọnụ ala karịa na otu) na otu nọmba nke ehihie na abalị na a ụgbọ okporo ígwè, azọpụta banyere $500! Ọ bụrụ na nke na-adịghị smart atụmatụ mmefu ego, anyị na-amaghị ihe bụ!
Oge arụmọrụ na Night Ụgbọ oloko & Nkasi Obi
Irè nke ụgbọ okporo ígwè eme njem bụ-apụghị ịgbagha agbagha! European ụgbọ oloko na-ngwa ngwa, haziri na ihe niile ị na-achọ na a njem nhọrọ n'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ị na- ejegharị ejegharị na-ebe nso ka Italy ma ọ bụ a n'ihu ebe. Ejegharị ụgbọ okporo ígwè bụ mma maka onye ọ bụla na-achọ na-akpa na akara na tour ọrụ, ha ọkacha mmasị ngosi nka ma ọ bụ n'ebe ọ bụla ọzọ ha ga-zubere gaa. Night ụgbọ oloko na-enye gị nhọrọ n'ezie izurutụ ike n'oge abalị oge. Mgbe na-eji n'ehihie na-enwe ọmarịcha sceneries site window na n'oge ụgbọ okporo ígwè na-akwụsị.
Lecce na Milan Ụgbọ oloko
Reggio Calabria na Milan Ụgbọ oloko
Salerno na Milan Ụgbọ oloko
environmentally Enyi na Enyi
Dị nnọọ ka mgbe ụgbọ oloko, n'abalị ụgbọ oloko bụ ndị kasị mma na-ejegharị ejegharị nhọrọ maka mbara ala anyị. Ebe ọ bụ na ha na-anya-erughị CO2 kwa njem karịa ụgbọ elu-eme, ha nwere ike ịbụ njem nke ọdịnihu. Ya mere, ma ọ bụrụ na ị na- environmentally maara, ị maara ihe n'ụzọ nke ị ga-ejegharị ejegharị site ugbu a na.
Levanto na Turin Ụgbọ oloko
La Spezia na Turin Ụgbọ oloko
Naples na Turin Ụgbọ oloko
Rome na Turin Ụgbọ oloko
Night Ụgbọ oloko na-ukwuu n'ihi na Ime Friends
Ọ bụrụ na ị na- njem nanị, ụgbọ oloko na-enye unu ohere izute a ọtụtụ ndị si gburugburu Europe, niile dị iche iche na ibe. Chọta a ole na ole yiri ọdịmma ikwu okwu banyere, na ị na-na na nwere mere enyi maka ndụ! Plus, ihe bụ ihe dị mkpa ọbụna karị a gburugburu (dịkarịa ala maka isiokwu anyị na na na na), ị na-na na hụrụ ala, pụrụ ịdabere na ndị mmadụ ịkọrọ gị na-ehi ụra ulo na! Night ụgbọ oloko dị ebube, ma downside bụ i nwere ike ejedebe na ụlọ ndò na ụyọkọ ndị igwouru, isi (ndo!) ma ọ bụ ... dị nnọọ ụkwara a ọtụtụ. Ya mere, achọta a otu na bụ oké n'ihi a chat na a ole na ole, ehihie na abalị otu mfafaha ogige bụ mma!
Chaị, anyị fọrọ nke nta echefu na-agụnye ruo mgbe ebighị ebi-egwu uru nke abalị ụgbọ oloko akpọ – sinik mkpesa! Adịghị arahụ ụra site Fjords, na Alps, na ndị ọzọ na ihe yiri nke ahụ mara mma sceneries. Ma na-eche ụgwọ ịmụrụ anya ka ị rue Germany si ulo oru gafere, ma. Oh, na - ịse foto, ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị site na window!
Ka anyị mara site tweeting anyị na @SaveATrain! , Ị nwere ike ịchọta anyị na ndị ọzọ na-elekọta mmadụ na ọwa na ala nke Zọpụta-A-Train na N'ezie, i nwere ike ịtụ anyị gbaa ụgbọ okporo ígwè.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/5-reasons-night-trains/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#abalị #trainlovers ụgbọ oloko Train Travel travelgermany travelitaly traveltips